UTembo akafunanga ukusola umdlali owenze iphutha koweChiefs - Impempe
UTembo akafunanga ukusola umdlali owenze iphutha koweChiefs
UKudakwashe Mahachi weSuperSport United
Akuvumi awukhombe kumdlali wakhe umunwe ngephutha iKaizer Chiefs ethole ngalo igoli umqeqeshi weSuperSport United, uKaitano Tembo ocazelane amaphuzu naMakhosi emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo e-FNB Stadium.
UTembo uyavuma ukuthi kube yiphutha lika-Onismor Bhasera elidalele uReeve Frosler igoli lokuqala lo mdlalo kodwa akuyena yedwa obesephutheni njengoba iqembu liwatholile amanye amathuba okushaya amagoli.
Phakathi kwalawo mathuba kuvele nephenathi esiwombeni sesibili yathathwa nguBradley Grobler ophambanise u-Itumeleng Khune nebhola esiwombeni sesibili.
UBhasera onomlando omude wokuhlushwa ukulimala ubebonakala okokuqala ngemuva kwesikhathi engadlali ngenxa yakho.
“Kunzima ukuthi iphutha ngingalikhomba kumdlali oyedwa futhi osenesikhathi eside engadlali. Inkinga ikithina sonke,” kusho uTembo ngemuva komdlalo.
“Indlela esiqale ngayo isiwombe sokuqala bekusifanele ukushaywa ngoba besilandela ngemuva kukona konke abebekwenza. Bebeliphethe ngaso sonke isikhathi futhi kucaca ukuthi asinazo izimpendulo,” kusho uTembo.
Lo mqeqeshi uyalamukela iphuzu kodwa uthi uzosheshe akhohlwe indlela iqembu lakhe elidlale ngayo esiwombeni sokuqala.
“Ngizokhumbula isiwombe sesibili kuphela kulo mdlalo ngoba kwesokuqala bekunokwesaba nokuhlonipha iChiefs ngendlela engaqondakali kubadlali bami.
“Izinto zize zaba ngcono sesifake uGabuza (Thamsanqa) ngoba yena ubelwa nabo efika nasebholeni okuyinto ebesingayenzi esiwombeni sokuqla.
“Lokhu kulwa kukaGabuza bekuvula ithuba lokuthi sihlasele ngabanye abadlali basesiwini ikakhulukazi uKuda (Kudakwache Mahachi),” kuqhuba uTembo.
Ukujabulele kakhulu ukubuya kwabadlali bakhe basemuva uTembo ngoba abagcini ngokuvala emuva kepha bayahlaselisa.
“UBhasera bekufanele alilahle ibhola bethola igoli kodwa angikwazi ukukhala ngaye ngoba ngaphandle kwalokho ubeyiqhawe lethu kulo mdlalo ekubeni ubengekho muva nje elimele.”
UTembo ozobhekana ne-Orlando Pirates emdlalweni olandelayo weligi uthandazela ukuthi bonke abadlali bakhe babe fithi ngokwanele.
“Akekho ongaboni ukuthi imidlalo ithothene kanti ngebhadi lethu silandelanisa enzima yodwa. Ngiyazi singayithola imiphumela emihle lapha kodwa kufanele sihloniphe iPirates ngoba isefomini enhle kulezi zinsuku.
“Konke lokhu kungenzeka kahle umangase bonke abadlali bethu babefithi futhi kungabibikho ongeke abekhona ngenxa yokulimala kwazise sibadinga bonke.”
Previous Previous post: Akufananga, iChiefs ikwazile ukuvika ukuhlulwa kwiSuperSport
Next Next post: Igxume yakhipha iChiefs kwiTop 8 iBaroka ikhonya kowomkhaya baseLimpopo